पाँचवटा जिल्लाको विवाद मिल्यो भने आन्दोलन रोकिन्छःमृगेन्द्रसिंह यादव - News Today
पाँचवटा जिल्लाको विवाद मिल्यो भने आन्दोलन रोकिन्छःमृगेन्द्रसिंह यादव
मृगेन्द्रसिंह यादवले विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टी सरकारमा गएपछि महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । सप्तरीस्थित यादवकै निवासमा पुगेर रातोपाटीका प्रतिनिधि एसके यादव र राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि मधेस बन्द छ, यस अवस्थामा तपाईंको गुजारा कसरी चलेको छ ?
अहिले अलि अप्ठेरो छ, तर गुजारा चलेको छ । पहिला ग्यास चुलोमा खाना पकाउथ्यौँ, अहिले जलावन (दाउरा) मा पकाउँछौँ । तेल नपाएर तीन महिनादेखि (बोलोरो गाडी देखाउँदै) गाडी थन्काएर राखेका छौँ । यसो काम परेका बेला मोटरसाइकल चढ्छौँ । दाल–चामलको जोहो आफ्नै खेतबारीमा हुन्छन् ।
अरु जनताको गुजारा कसरी चलेको छ त ?
अरुको पनि यस्तै हो । समस्या त उनीहरूलाई पनि छ, तर यो अधिकारको लडाइँ हो । परिवर्तनको लडाइँ हो । अधिकारका लागि लडिरहेका छौँ भनेर अलिकति अप्ठेरो झेलेर भए पनि जनता आन्दोलनमा लागेका छन् ।
अबको मधेस आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
छलफल र वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलनलाई टुंग्याउँनुपर्छ । अब यो आन्दोलनलाई धेरै लामो लैजानु हुँदैन । मधेसी जनतालाई पनि आन्दोलन गर्ने रहर छैन । सरकारले मधेसी जनताको अधिकार पूरा गरिदियोस्, आन्दोलन बन्द हुन्छ । हामीले पनि सधैँ आन्दोलन होस् भनी चाहेका छैनौँ । तर, सरकारले वार्ताको नाममा नाटक गरिरहेको छ । सरकारले आन्दोलनकारी पक्षसँग पटक–पटक वार्ता गरे, तर कहिल्यै सफल हुन सकेन । वार्ताको नाममा मधेस आन्दोलनलाई अल्झाउने काम गरेको छ । मधेस आन्दोलनलाई लम्ब्याउने काम गरेको छ । आन्दोलन भएको सय दिनभन्दा बढी भइसक्यो, तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । मधेसी जनतलाई जिस्क्याइएको छ । आन्दोलनको खिल्ली उडाइएको छ । मधेसी जनताले ऐतिहासिक मानव–सांग्लो बनाए, तर यही देशका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई माखे–
सांग्लो भने । के यही हो त आन्दोलनप्रतिको गम्भीर्यता ? सरकार अलिकति पनि गम्भीर भइदिएको भए, यस्तो समस्या हुने थिएन । तपाईं यहीँ राजविराजको आन्दोलन हेर्नुहुन्छ भने प्रहरीहरूले ‘मोदीको छोरा आइज दश लाख रुपैयाँ लैजा’ भनी गाली गरेर लखेटिरहेको देख्नुहुन्छ । आन्दोलनकारीले पनि यसको जवाफमा अनेक भनेका छन् तर आन्दोलनकारीभन्दा त राज्यपक्ष वा पुलिस प्रशासन जिम्मेवार पक्ष हो नि । त्यो कुरा राज्यले सायद बुझेको छैन ।
पञ्चायतकालमा राजनीतिमा सक्रिय रहनुभयो, अहिले कस्तो परिवर्तन भएको पाउनुभएको छ ?
अहिलेको जस्तो अवस्था पञ्चायतकालमा पनि थिएन । सत्तापक्षबाट यस्तो दमन पञ्चायतकालमा पनि हुँदैनथ्यो । प्रहरीले जनताको घर–घरमा गएर कुटपिट गर्दैनथ्यो । यसपटक यस्तो पनि गरेको छ, राजमार्ग खुलाउन प्रहरीले नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक लगाएर नेपाली सेनाले मधेसी जनतामाथि दमन गरेको छ ।
यसको निकास के हुन सक्ला ?
मैले अघि पनि भनेँ कि, यसको एउटै निकास वार्ता हो । वार्ताबाट यसको समाधान नखोजेसम्म त्यत्तिकै निकास निस्कँदैन । झापा, मोरङ, सुनसरी, कञ्चनपुर, कैलाली मधेस हो कि होइन ? यदि मधेस हो भने यसलाई मधेस प्रदेशमा राख्न के आपत्ति ? त्यहाँका मधेसी जनता भन्छन्, हामी मधेस प्रदेशमा बस्न चाहन्छौँ तर केही स्वार्थी नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरी बेकारका बखेडा झिकिरहेका छन् । हाम्रो बटमलाइन सीमांकन हो । पहिलाको राज्य पुनः संरचना समितिले तय गरेको प्रतिवेदनअनुसार पनि सीमांकन छुट्याइदिए धेरै उत्तम हुन्थ्यो । तर, राज्यले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । मधेसलार्ई एउटै प्रदेश बनायो भने मधेस भारतमा मिसिन्छ भनी आरोप लगाइएको छ । यदि त्यस्तो हो भने मधेसका ८ जिल्लाका एउटा प्रदेश किन बनायो ? भारतमा मिलाउनकै लागि बनाएको हो त ? यदि त्यस्तो होइन भने, बाँकी रहेका अन्य जिल्ला मधेसमा किन नहालेको हो त ? यो राज्यको नाटक हो । मधेसी जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम गरिरहेको छ । अहिले पाँचवटा जिल्लाको विवाद हो । यो पाँचवटा जिल्लाको विवाद मिल्यो भने आन्दोलन रोकिन्छ ।
यी पाँच जिल्ला मधेसमा पार्न सत्ता पक्षलाई किन नमानिरहेको होला ?
सत्तापक्षले विभिन्न बहानाहरू बनाइरहेका छन् । यी पाँच जिल्लामा नेपाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको छ, उनीहरू मधेस प्रदेशमा जान चाहँदैनन्– राज्य पक्षले यही भनिरहेको छ । त्यसो भए के अहिलेको आठ जिल्लाको दुई नम्बर प्रदेश (मधेस प्रदेश) मा पहाडी समुदायका छैनन् त ? छन् नि । थुप्रै पहाडी समुदायहरू यता पनि छन् । खोइ त कसैले भनेको ? अरु केही होइन, पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई केपी शर्मा ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाले मधेसमा मिल्न दिनुभएको छैन । पश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई शेरबहादुर देउवा र भीम रावलले मधेसमा मिल्न दिनुभएको छैन । नेताहरूले आ–आफ्नो स्वार्थका कारण देशलाई द्वन्द्वमा फसाएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, कञ्चनपुर, कैलालीलगायत मधेसका जिल्लामा २२ सालपछि मात्र पहाडी समुदाय आएर बसोबास गरेका छन् । यहाँका नदीनाला, वन–जंगल सबै मधेसका हुन् । तर, यी सब दिनका लागि उहाँहरूलाई किन अप्ठेरो भइरहेको छ त ? सत्तापक्ष मधेसको अधिकार दिन अझै पनि मानसिक रुपले तयार भएको छैन भने कुरा छर्लंग बुझ्न सकिन्छ ।
महाभारत पनि पाँच गाउँका कारण भएको थियो । कौरवले पाण्डवलाई नदिने हठ लिएका थिए र त्यसै कारणले महाभारत पनि भयो । कृष्ण सिटौलाले पनि विराटनगरमा गएर भन्नुभएको छ कि झापादेखि सुनसरीसम्मको भाग मधेसमा कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ ।
सीमांकनका विषयमा दुइटै पक्षले अडान लिएको अवस्था छ, समाधानको सूत्र के होला ?
समाधान त वार्ताबाट नै निकाल्नुपर्छ । आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का त गर्नु हुँदैन । आफ्नो अडान लिएर मात्र हुँदैन । दुइटै पक्ष कहीँ न कहीँ गएर मिल्नु नै पर्छ । मधेसी दलले पनि अडान छोड्नु पर्छ ।
मधेसवादी दल कतिसम्म कम्पर्माइज गर्न तयार छन् त ?
मुख्य विवाद पाँच जिल्लाको हो । महाभारत पनि पाँच गाउँका कारण भएको थियो । कौरवले पाण्डवलाई नदिने हठ लिएका थिए र त्यसै कारणले महाभारत पनि भयो । कृष्ण सिटौलाले पनि विराटनगरमा गएर भन्नुभएको छ कि झापादेखि सुनसरीसम्मको भाग मधेसमा कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ । अनि मधेसी जनताले पनि भनेका छन्, हामी कुनै पनि हालतमा यी जिल्ला लिन्छौँ, लिन्छौँ । मुख्य लडाइँ यसैमा छ । मुख्य पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउनुपर्छ र यसैमा केन्द्रित भएर वार्ता हुनुपर्छ । तर, मधेसवादी दलले के कति कम्पर्माइज गर्न सक्ला त्यो कुरा मैले एक्लै भनेर हुँदैन । यस्ता कुरामा साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ ।
यो आन्दोलन भारतले गराएको आरोप पनि छन् नि ?
–यो आरोप किन लगाइएको छ, त्यो लगाउनेहरुले नै जानून् । तर मलाई यति थाहा छ कि यो मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन हो, भारतले होइन । भारतले नाकाबन्दी गरेको भए भित्रबाट समान आएर किन रक्सोलमा रोकिन्थ्यो त ? दिल्ली, मुम्बई, बरौनीलगायत ठाउँबाट रक्सोलसम्म आउँदैनथ्यो । अर्थात्, हेर्नुभयो भने नेपाल–भारतको नाकामा आएर सबै थन्केर बसेका छन् । मधेस आन्दोलनका कारण नाका बन्द छन् । राज्यले नै मधेसको आन्दोलनलाई बदनाम गराउन यस्तो उपाय अपनाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मधेस आन्दोलनप्रतिको ध्यान अन्तै मोड्नका लागि भारतप्रति आरोप लगाएका हुन् ।
यो आन्दोलनले गर्दा हिमालदेखि पहाड र तराईसम्मका सबैको चुलोमा समस्या पुगेको छ, यसप्रति तपाईंहरूको ध्यान किन गइरहेको छैन ?
यो कुरा लिएर हामीलाई पनि दुःख लागेको छ । तर, यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले आन्दोलनकारीसँग सार्थक वार्ता गरेर चाँडो टुंगो लगाएर यसको सामाधान निकाल्नुपर्छ । जनताले दुःख पाइरहेका छन् भने, सरकारले किन हेरेर बसेको छ ? सरकारले वार्ता टुंग्याएर समाधान खोज्नु पर्यो नि !
तपाईं आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ, आन्दोलनकै कारण राजीनामा दिनुभएको कि अरु आन्तरिक कारण छ ?
पार्टीमा खासै आन्तरिक विवाद थिएन । मुख्य कुरा पार्टीका अध्यक्षले अकस्मात आठबुँदे सम्झौता गरी सरकारमा जानु नै मुख्य समस्या हो । सारा मधेस आन्दोलित भएका बेला पार्टीका अध्यक्ष यसरी सरकारमा जानु हुँदैनथ्यो । अध्यक्षको यो सत्ता लिप्सा नै हो । त्यसपछि पार्टीमा दुईटा धार देखिन थाल्यो– सत्ता लिप्साको पक्षमा जाने र अधिकारका लागि आन्दोलनमा जाने । मैले आन्दोलनको बाटो रोजेर राजीनामा दिएँ । पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै जानकारी नै नदिईकन उहाँ सरकारमा जानुभयो, त्यसले गर्दा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि आक्रोशित भएका छन् । धेरैले पार्टी पनि छाडिसकेका छन् ।
अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीमा सल्लाह गरेर नै सरकारमा गएको भन्नुहुन्छ नि ?
पार्टीका कुनै पनि नेताले भनुन् कि विजयकुमार गच्छदारले सरकारमा जानुअघि पार्टीमा सल्लाह गरेका छन् । म त भन्छु, उहाँले एक वचन कसैसँग सोध्नुभएको छैन । भेटेर त अर्कै कुरा, फोनमा पनि सल्लाह भएको छैन । न राजनीतिक समितिको बैठक बस्यो, न त केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । एकाएक कसैलाई एक वचन नसोधी आठबुँदे सम्झौता गरेर सोही दिन मन्त्रीको सपथ लिनुभयो ।
अहिले तपाईं स्वतन्त्र व्यक्ति कि कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा आन्दोलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ?
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीमा म लगायत अरु थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताले राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँहरू पनि विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ । हामी स्वतन्त्र रुपमा सहभागी भएका छौँ । मधेसमा जन्मेको, मधेसमा हुर्केको, मधेसमा राजनीति गरेको नाताले मधेस अधिकारका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका छौँ । आन्दोलन सकिनेबित्तिकै मात्र हामीले नयाँ संगठन बनाउने कि अरु कुनै पार्टीमा जाने विषयलाई टुंगो लगाउँछौँ ।
नयाँ संगठन बनाउने मानसिक तयारी भइसकेको हो ?
मधेसी जनताको चाहना अब नयाँ संगठन बनाउने होइन । सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो । जो अलग–अलग छन्, ती सबै दल तथा संगठनलाई एक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ । शरतसिंह भण्डारीदेखि लिएर राजकिशोर यादवसम्मका नेताले भेट्नुभएको छ । कतिपयले फोन गर्नुभएको छ । उहाँ सबैलाई हामीले तपाईंहरू एक हुनुस् भनेका छौँ । तपाईंहरू एक हुनका लागि हामीले के के गर्नुपर्छ, गरौँला । तर एक हुनुस् भनेर मैले भनेको छु । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि हामीलाई पार्टीबाट निस्केकाहरू सबै एक ठाउँमा आउनुस् भनी सुझाव दिनुभएको छ ।
त्यसो भए विजयकुमार गच्छदारले मधेसलाई धोका दिएको तपाईंहरूको ठहर हो ?
विजयकुमार गच्छदारले धोका दिएको मात्र होइन, उहाँले मधेसी जनतामाथि गद्दारी पनि गर्नुभएको छ ।
फोटो ः अशोक दुलाल
source ः www.ratopati.com
Previous : साह परिवारको कहालीलाग्दो पीडा, ‘मम्मी उजरा सारी अहाँके नई निक लागैय’
Next : प्रहरीले भने ‘मोदीका छोरा आन्दोलन गर्छस् गोली ठोकिदिन्छु’